सगुनले दोश्रो चरणको शेयर बिक्रीको मिनी आइपीओ खोल्यो
२० जेष्ठ, २०७७ शीतलपाटीन्युज डटकम। 2715
लण्डन। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले स्थापना गरेको सामाजिक इकमर्स स्टार्टअप कम्पनी सगुन (www.sagoon.com) ले विश्वभरबाट लगानी जुटाउन १ जुन, २०२० देखि दोस्रो चरणको सेयर निस्कासन गरेको छ। सगुनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीका अनुसार यस चरणमा ग श्रेणीको साधारण सेयर प्रतिकित्ता ३० डलरका दरले ३ लाख कित्ता सर्बसाधारणलाई विक्री गर्ने भयको छ। सगुन (Sagoon) को सेयरमा विश्वभर रहेका सर्बसाधारणले कम्तिमा ३० कित्ता ३० डलरको सेयर ९ सय अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले उक्त सेयर सीमित समयका लागि पहिले आवेदन गर्नेले किन्न पाउने गरी निश्कासन गरेको हो।
विज्ञप्तीका अनुसार, यस चरणको मिनी आइपीओ मार्फत शेयर निस्कासन गर्नका लागि सगुनले पेश गरेको विवरणपत्रका आधारमा The US Securities and Exchange Commission (SEC) (https://www.sec.gov/) ले सगुनलाई मिनी आइपीओ मार्फत सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न योग्य ठहर गरी अनुमति प्रदान गरेको थियो। सोही आधारमा दोश्रो चरणमा शेयर निस्कासन गरेको छ। सगुन (Sagoon) ले सन् २०१७ मा यसको पहिलो रेज ए प्लस अन्तर्गत मिनी आइपिओ मार्फत प्रतिकित्ता २३ डलरका दरले शेयर निस्कासन गरेको थियो। त्यतिखेर सगुनमा विश्वभरबाट ४ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले ४६ लाख डलर लगानी गरेका थिए।
सामाजिक सञ्जालको भीडमा नयाँ सोच र योजनाको सपना बोकेर सन् २०१४ बाट सगुन सञ्चालनमा आएको हो। सामाजिक सञ्जाल र इकमर्शको प्लेटफर्मका रुपमा सगुनलाई उभ्याई यसका प्रयोगकर्ताहरुलाई समेत आफ्नो आम्दानीको हिस्सा बाड्ने नयाँ अवधारणा सगुनले बोकिरहेको छ। विगत केही समय देखि परिक्षणका रुपमा सगुनले यो अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। पहिलो चरणको मिनी आइपीओ मार्फत विश्वभरिका सर्वसाधारणहरुबाट प्राप्त आर्थिक लगानी र हौसला पश्चात सगुनले निकै फड्को मारेको छ। विशेषगरी आफ्नो प्रोडक्टमा ध्यान केन्द्रित गरेको सगुनले हाल ‘सगुन लाइट’ एप बजारमा ल्याइसकेको छ। साथमा सगुनले भन्दै आएको ड्रिम प्रोडक्ट ‘सोसियल स्मार्ट कार्ड’को बेटा भर्सन समेत शुरु गरिसकेको छ।
‘एन्ड्रोइड र आइओयस दुवै अपरेटिङ् सिस्टमका लागि उपलब्ध ‘सगुन लाइट’ एपमा सामाजिक सञ्जाल र इकमर्श दुबैको समायोजनको प्रारुप देख्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको पाटोमा हाल बजारमा उपलब्ध अन्य सामाजिक सञ्जाल भन्दा आफूलाइ फरक र प्रयोगकर्ताले मन पराउने विशेषता सहित आएको छ । जसमा विविध विषयका टपिक्सहरु राखिएका छन् र प्रयोगकर्ताहरुले आफ्ना रुचिका विषय/क्षेत्र छानेर त्यसैमा आफ्ना विचार बाड्ने र सोही विचारका अन्य प्रयोगकर्ताहरुसंग जोडिन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले चाहना गरेका यस्ता विशेषता कारणले पनि सगुन प्रतिको आकर्षण पछिल्ला दिनहरुमा अत्यधिक बढेर गएको पाइएको छ। सगुनका सहसंस्थापक कविन्द्र सिटौला बताउँछन्।
सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीका भन्छन् – हामी विश्वभरीका लगानीकर्ताहरुबाट पाएको सहयोग र विश्वासले उत्साहित र गौरवान्वित भएका छौं । उहाँहरुको सहयोगले सगुनलाई हामीले बालकदेखि वृद्ध अबस्थासम्मका मानिसलाई जोड्ने प्लेटफर्म बनाउन सकेका छौं। गिरीले भने – सगुनमा प्रयोगकर्ताहरूले साथीहरूसँग सम्पर्क गर्ने मात्र हैन, सोसियल इकमर्समा समेत संहभागी हुनसक्नेछन् । यसमा खाता खोलेर विताएको समयका अधारमा आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ। नेपाल र भारतका प्रयोगकर्ताले सगुनलाई अझ धेरै मन पराएको र यी दुई मुलकका प्रयोगकर्ताले दिनमा २३ पटकभन्दा बढी सगुन (Sagoon) खोल्ने गरेको जानकारी दिए।
सगुन (Sagoon) को सेयर खरिद गर्न इच्छुक ब्यक्तिले https://www.sagoon.com/invest मा गएर वा सगुन एपमा रहेको मिनि आइपिओ (Sagoon Mini-IPO) ट्याब छानेर लगानी गर्न आवेदन गर्न सक्नेछन्। संस्थापक गिरी भन्छन् – ‘हामी सामाजिक सञ्जालको विश्व बजारमा नयाँ इतिहास रचना गर्ने सपना बोकेर अगाडि हिंडिरहेका छौं । हामी हिड्न ढिलो होला तर गन्तव्यमा पुगेरै छाड्ने छौं । मात्र हामीलाई विश्व समुदायको साथ र हौसला चाहिन्छ, विशेषगरी नेपाली समुदायबाट। विश्वमा एक दिन सगुन शब्दको अर्थ जस्तै सगनुलाई ‘शुभ क्षण’ र ‘भाग्य’ बनाएरै छाड्ने छौं।’
RN0686X72572 Air Quality System
????????????2- Cheap Camping Chairs
?????? Anode Boiler
???????????? 60w Charger
67611STZZD012CR01 Dryer Air Filter
CAL43047P350 1550nm Direct Modulated Transmitter
165213RSB07OA Pvc Pipe Shredder